Waa maxay noocyada qaabka sawirka jira? | Hal-abuurka khadka tooska ah
Go'aanka waxa nooca qaabka sawirka Waa inaad kaydisaa faylkaaga, waxay noqon kartaa madax-xanuun, haddii aan la garanayn noocyada kala duwan ee faylasha sawirada, oo aad had iyo jeer ku dhammayn karto inaad u kaydiso qaab isku mid ah "cabsi" inuu luminayo tayada, in aanu furmi doonin. haddii lagu kaydiyo qaab kale, iwm.
Arrintan boostada waxaan ku bari doonaa noocyada ugu caansan ee qaabka sawirka, waxaadna baran doontaa sida loo badbaadiyo sawiradaada, hadday yihiin khariidad-qariirad ama sawiro la saaray.
Waxa ugu horreeya ee aan ku bareyno maqaalkan waa farqiga u dhexeeya sawirada bitmap iyo sawirada vector, ka dibna noocyada qaababka sawirka ee ku dhex jira.
1 Bitmap vs sawirka vector
2 Noocyada Qaababka Sawirka Vector
2.1 Qaabka AI
2.2 Qaabka SVG
2.3 Qaabka EPS
2.4 Qaabka Pdf
3 Noocyada qaababka sawirka bitmap
3.1 qaabka JPG ama JPGE
3.2 Qaabka PNG
3.4 Qaab GIF
3.5 Qaabka PSD
4 Ma jiraa qaabka sawirka ugu fiican?
Bitmap vs sawirka vector
Waxaa jira laba nooc oo sawir ah, sawirada bitmap iyo sawirada vector, waa laba qaab oo kala duwan, ha ku wareerin.
Sawirada Bitmap ama sawirka raster Waa mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee aan heli doono.
Kuwaas Sawiradu waxay u samaysan yihiin sida magacoodu horeba u tilmaamay, ee pixels, dhowr dhibcood oo aad u yaryar. Mid kasta oo ka mid ah dhibcahan yaryar waxaa la siiyaa midab, iyadoo la adeegsanayo isku-dubarid pixels-yada waxaa lagu habeeyaa shabag ama shabag, oo sidaas awgeed waxay ka samaysan yihiin sawirka. Inta badan pixels sawirku ka kooban yahay, xallinta sare waxay yeelan doontaa.
Sawirkan aan hoos ku aragno waxaan arki karnaa sida marka la kordhinayo zoom-ka sawirku uu lumiyay tayada oo uu u muuqdo pixelated.
Dhanka kale, waxaan helnaa sawirada vector, waxay yihiin sawiro lagu sameeyay vectors. Waxaa lagu dhisay geeso badan oo ay ku sameysteen dhibco, kaas oo kombuyuutarku fasirayo oo tilmaamaya masaafada u dhaxaysa.
sawir faleefay, ma lumin tayada mar haddii ay yihiin xubno la miisaami karo wax kasta oo aad rabto, iyo wakhtiga badbaadinta waxay la qabsanaysaa xallinta aan rabno inaan siino.
Waxaan si cad u arki karnaa marka aan isticmaalno qalabka zoom kombayutaradayada ama taleefannada gacanta. Haddii aan sawir ka qaadno qaabka loo yaqaan 'bitmap format', inta aan sii weyneyno, inta badan ee pixelated waxaan arki doonaa, dhanka kale, haddii aan sidaas oo kale ku sameyno sawirka la sawiray, lama noqon doono pixelated. Xallinta sare, taas oo ah, tirada badan ee pixels ee aan haysano, si fiican ayuu sawirku u eegi doonaa.
Marka aan ogaanno noocyada sawirka ee aan heli karno, waxaan ka hadli doonaa noocyada qaabka sawirada ugu muhiimsan, kuwaas oo aan ku badbaadin karno faylashayada. Si aan uga hadalno waxa aan sameyneynaa kala saarid, qaababka sawirka gudaha sawirada vector iyo qaababka sawirka ee bitmaps.
Noocyada Qaababka Sawirka Vector
Marka aan ogaano waxa ay yihiin sawirada nooca vector, waxaan dooneynaa inaan falanqeyno qaababka kala duwan ee jira si loo badbaadiyo sawirada vector-ka.
Qaabka sawirka AI waa midka muuqda haddii aan la shaqeyno barnaamijka Adobe Illustrator, maadaama uu yahay barnaamij nakhshad kaas oo aad la shaqeyso vectors. Waa mid ka mid ah qaababka aadka loo isticmaalo marka la abuurayo sawirada vector.
Markaad kaydinayso faylka barnaamijkan, asal ahaan waa in lagu kaydiyo qaabka AI, waa faylka asalka ah ee Sawirka. Laakiin ma aha oo kaliya in aan helno qaabkan wax badbaadinta, barnaamijku wuxuu na siinayaa noocyo badan oo badan oo ah qaabab kaydin oo ixtiraamaya vectors, sida kordhinta EPS ama xitaa bitmap, iyadoo ku xiran waxa aad raadineyso.
Garaafyada la qiyaasi karo, ama sida loo wada yaqaan, qaabka sawirka SVG. Waa qaab in yar oo yar si fiican loo yaqaan oo la yahay faa'iido u leh in loo isticmaalo warbaahinta online-ka ah maadaama ay bixiso tayo aad u fiican faylalkeeda.
SVG waa qaab vector, taas oo macnaheedu yahay inuu yahay la qiyaasi karo, miisaan yar oo cabbirro yar yar ayaa si sax ah u shaqeeya.
Qaabka noo ogolaanaya inaan ku furno faylka barnaamij kasta oo naqshadayn kara, tusaale ahaan Adobe Illustrator. Faylasha qaabkan Waxay yihiin vector si ay u taageeraan is-miidaminta iyaga oo aan lumin tayada. Waxaa inta badan loo isticmaalaa kaydinta iyo daabacaadda sawirada.
Waxaa hubaal ah inaad la yaabi doonto inaad PDF ka dhex aragto kooxda qaabab muuqaal ah, waxayna aad ugu dhowdahay inaad la xiriirto kaydinta iyo akhrinta dukumentiyada qoraalka ah. Faylasha PDF waxaa loo isticmaali karaa si loo badbaadiyo sawirada ku saleysan vector sidoo kale.
Noocyada qaababka sawirka bitmap
Waanu ognahay waxa ay yihiin afarta qaab ee sawirka vector, marka xigta, waxaanu ogaan doonaa noocyada aadka loo isticmaalo ee qaababka sawirka bitmap.
qaabka JPG ama JPGE
Habkani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo ay isticmaalaan isticmaalayaashu, laakiin sidoo kale, Waa mid ka mid ah kuwa luminaya tayada ugu badan marka la kaydinayo, sababtoo ah cadaadiskeeda oo sarreeya. Waa qaabka sawirka raster-ka, kaas oo ay tahay in la isticmaalo marka aad u baahan tahay sawirro yaryar oo aan culus ahayn.
Qaabka PNG, oo ka duwan kan aan hadda aragnay, waxaa ku jira daahfurnaan la'aan tayada lumin, markaa waa arrin lagama maarmaan ah markaad badbaadinayso mashaariicdaada. PNG waxay bixisaa cadaadis aan khasaare lahayn, marka lagu daro kaydinta tafaasiisha midabka iyo bixinta akhriska weyn ee qoraalka la keydiyay.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu loo isticmaalo in lagu badbaadiyo sawirada leh tiro badan oo tafaasiil ah, ma laha khasaaro tayo leh marka la cadaadiyo. Inta badan waxaa loo isticmaalaa faylalka sawirka, ka dib habka tafatirka, ayaa la daabici doonaa.
Qaab kale oo ku dhex jira sawirada raster waa GIF, kaas oo ahwaxay taageertaa animations abuurista saameyn muuqaal weyn iyadoo si joogto ah u ciyaareysa sawirada.
Qaabkan inta badan ma taageeraan dhammaan codsiyada, markaa GIF-ga waxaa laga yaabaa inuusan ciyaarin.
Qaabka PSD, sida magaceedu tilmaamayo, waxa iska leh barnaamijka tafatirka Adobe Photoshop, waxaana inta badan loo isticmaalaa sawirada bitmapka. Sawirada qaabkan loo kaydiyay ayaa ilaalin doona lakabyada dukumeentigu leeyahay. Caqabadaha jira waxaa ka mid ah haddii aadan haysan barnaamijka tafatirka ma awoodid inaad furto faylka.
Ma jiraa qaabka sawirka ugu fiican?
Qaabka sawirka ugu fiican wuxuu ku xirnaan doonaa baahiyaha mid walba uu leeyahay sawirka uu ku shaqeynayo iyo ujeedada laga leeyahay.
Sidaan aragnay, waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah qaababka sawirada, halkan waanu ka soo hadalnay kuwa ugu waaweyn laakiin qaar kale ayaa jira, oo mid kastaaba wuxuu leeyahay ujeedo, hadba waxaad raadinayso waxay noqon doontaa mid ama mid kale. Waa inaad ogaataa meesha shaqadaadu noqon doonto, meesha dib loo soo saari doono oo markaa waxaad ogaan doontaa qaabka kuugu habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Waa maxay noocyada qaabka sawirka jira?